musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Samoa Kuputsa Nhau » Yakanaka Samoa inogamuchira yekufambisa bubble kuvandudza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Samoa Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Samoa Tourism Authority's CEO Fa'amatuainu Lenata'i Suifua
Kufamba bubble pakati peNew Zealand neCook Islands yakarongerwa Chivabvu
Kugadzwa kweTrans-Tasman bubble kunokurudzira kuvimba pakati pevashandi vekushanya kwePacific
Iyo bubble ichapa yakakosha kubatsirana mabhenefiti kune ese Pacific nyika
The Samoa Tourism Authority (STA) inokurudzirwa neyakagadziriswa yega-yemahara kuronga kwakatanga nezuro husiku pakati peAustralia neNew Zealand.
Izvi zvinouya zvichitevera mashoko ekuti nzira mbiri dzekufamba pakati peNew Zealand neCook Islands dzakatemerwa Chivabvu.
STA inogamuchira chiziviso seimwezve yakakosha yekumberi kune yakafara Pacific kufamba bubble, iyo ichatangazve kushanya uye kubvumira dzinoverengeka dzePacific Islands, kusanganisira Samoa, kuvaka zvakare uye kukurumidza kugadzirisa hupfumi.
Mukuru weSamoa Tourism Authority Fa'amatuainu Lenata'i Suifua akazivisa kuti: "Kugadzwa kweTrans-Tasman bubble kunokurudzira chivimbo pakati pevashandi vekushanyirwa kwePacific kuti gungwa rekufamba kwePacific haridzivisike."
Iyo bubble ichapa yakakosha kubatsirana mabhenefiti kune ese nyika dzePacific, pamwe neAustralia neNew Zealand, mukuwedzera kubva kumatambudziko ezvehupfumi anounzwa nepasi rose COVID-19 denda neSamoa ichave ichitarisa kune avo vanobva kuNew Zealand kubatsira kusimudzira hupfumi hwayo. apo kufamba kunotangazve zvakachengeteka, ndinovimba kupera kwegore. Hutano nekuchengeteka kweSamoan aiga yemuno (mhuri) inoramba iri pamberi pehurumende.
Nejekiseni riri kuburitswa, padivi pekusvitswa kwemaitiro akawedzera - kusanganisira kutsvaga kwekubata uye kuyedza kwese - hwaro hwakasimba hwakagadzirwa.